‘किम्फ’मा नेपाल पनोरमाअन्तर्गत ‘जालगेडी’ फिल्म उत्कृष्ट – Everest Times News
‘किम्फ’मा नेपाल पनोरमाअन्तर्गत ‘जालगेडी’ फिल्म उत्कृष्ट
काठमाडौं : काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सवको १५ औं संस्करण ‘किम्फ’ समापन भएको छ।
फिल्म महोत्सवमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा १४ फिल्म थिए। जसमध्ये अर्जेन्टिनाको फिल्म ‘धौलागिरी एसेन्ट टु दि ह्वाइट माउन्टेन’उत्कृष्ट घोषित भयो। फिल्मलाई गुलिएर्मो ग्लास र क्रिस्टियन हारबरुकले निर्देशन गरेका हुन्। फिल्मले १५ सय अमेरिकी डलर पुरस्कार हात पार्‍यो।
दोस्रो स्थानमा एन्डी कक्रम निर्देशित ‘शेर्पा स्टिउ’ र हेवन जी निर्देशित ‘सिङ्गिङ विथ एङ्ग्री वर्ड’ तेस्रो स्थानमा रह्यो। फिल्महरुले क्रमश: एक हजार र पाँच सय अमेरिकी डलर हात पारे।
बेन नाइट निर्देशित ‘द लास्ट हनि हन्टर’ले स्पेसियल मेन्सन र अडियन्स च्वाइज जित्यो। त्यस्तै उजतेक कोजाकेविच निर्देशित ‘मामा’ले जुरी अवार्ड पायो।
नेपाल पानोरमा अन्तर्गत फिक्सन फिल्म ‘जालगेडी’उत्कृष्ट ठहरियो। फिल्म निर्देशकले ७५ हजार प्राप्त गर्यो। त्यस्तै स्पेसियल मोन्सन अवार्ड ‘झालो’ले पायो।
नेपाल पानोरमा अन्तर्गत डकुमेन्ट्री विधामा ‘ग्याल्मुज हाउस’ उत्कृष्ट ठहरियो। उत्कृष्ट इसिमोड फिल्म ‘एट द क्रसरोड्स’ बन्यो भने डकपिच अवार्ड ‘मङ्की बिजनेस’ले जिते।
नेपालको चलचित्र समीक्षक समाजले दिएको ‘क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड’ फिल्म ‘बल्ड रोड’लाई दिइयो। समीक्षक सामिप्यराज तिम्सिनाले अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए।
समापन समारोहमा किम्फ अध्यक्ष वसन्त थापाले १५ औं महोत्सव सफल बनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। भने,‘चुनावले गर्दा हामी पछि सर्यौं। सन् २०१८ मा डिसेम्बर ५ देखि चार दिनकै लागि महोत्सव हुनेछ।’
'मेरो गाउँ, मेरो ठाउँ' भिडियो च्यालेन्जमा पत्रकार शेर्पाको वृत्तचित्र दुई विधामा मनोनयन, अरु कुन कुन परे मनोनयनमा ?
रहरको खेल [गजल]
सत्य डराएपछि [कविता]
साहित्यकार वाग्लेको नया गीत ' विगि्रयो काइला जुवा र तासैले' बजारमा
टिफमा उत्कृष्ट सर्ट फिल्म 'स्यामा पिन्बा'
'तिमीले दिएको'मा जीबी लामाको निर्देशन
भारतबाट तेस्रो मुलुक जान कडाई : एनओसी नभई जान नपाइने, के के चाहिन्छ एनओसीका लागि?
नेपालमा तेस्रो शक्तिको खाँचो
ब्रेक्जिटमा असफल मेको सरकार
नेपाल अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव वासिङटन डिसीमा जुन २८ बाट
एनआरएनए अमेरिकाको ८ औ साधारण सभाको तयारी पुरा